Hadhka, ma ogtahay? Waa farsamo aad u wanaagsan oo aan ka soo helay internetka. Farsamadan waxay ka kooban tahay erey ku soo noqnoqoshada eray isku mid ah oo isku mid ah waxa uu dhasho. Marka waxaad ku sameyn kartaa hoos-u-dhigista baqbaqaaq ama farsamo waxyaabo badan: hees, marin laga soo qaado filim, hadal, fiidiyowyadeyda! Xulku aad buu u ballaaran yahay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato qoraalka, dhegeyso oo ku celiso, waa intaas! Maxaa hadheeyay? waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo ku dhawaaqidaada laakiin kaliya maahan, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku shaqeyso dhawaaq, waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa ereyada adoo baranaya ereyo cusub. Waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa qaab dhismeedka xukunka, fiiri sida loogu dhisay hadal ahaan. Waa ilo aan la koobi karin oo ka mid ah faa'iidooyinka barashada, waxaan kuu xaqiijinayaa. Haddii aad ku horreyso hadalka, waad kalsooni badan tahay, markaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad aad u dhiirrigeliso inaad wax badan barato oo aad horumar sii kordhiso xitaa, waa wareeg wanaagsan.
Tallaabooyinka qaarkood in la raaco:
Talaabada 1: dhagayso
Talaabada 2: dhagayso oo ku celi sida weedh baqbaqaaq ah weedh ahaan
Talaabada 3: Dhageyso qoraalka oo dhan kuna celi qoraalka oo dhan Ku celi tillaabooyinka 2 iyo 3 inta jeer ee aad u baahan tahay.
Waa kucelcelin ku celcelin ah inaad ku guuleysan doontid hagaajinta xirfadahaaga hadalka. La socodsii haddii aad jeceshahay jimicsiga noocan ah, ii soo sheeg haddii ay waxtar leedahay. Haddii aad rabto inaad jimicsiga si toos ah u sameyso adigoon dhageysan sharraxaadda, waxay bilaabmaysaa ugu yaraan 7 ′
READ Laga soo bilaabo OPCAs ilaa OPCOs: qiimeyntii ugu horreysay
Miyaad ku hagaajisaa ku dhawaaqidaada Fransiiska Shadowing? Koorso 1 July 10th, 2021Tranquillus
horeXaq miyaan u leeyahay inaan weydiiyo qof shaqaale ah tirada dhibcaha ku qoran liisankiisa wadista?
socdaMiyaad ku hagaajisaa ku dhawaaqidaada Fransiiska Shadowing? Koorso 2